ikati & Mouse Mobile Slot Game -Mobile Casino Plex
ikati & impuku yi 5 bayotywe, 9 umdlalo umatshini payline iziqhamo ezikhoyo mFortune Casino. Umdlalo zibandakanya imiqondiso fun ezifana mouse engwevu, yikati brown, ikati kunye mouse isimboli ingxowa yemali, indawo mousetrap kunye samasi, kwakunye amakhadi lokudlala Ixabiso eliphezulu. Kukwakho ezityhutyhayo ezine ibhaso ebandakanya ikati ehlangana mouse kwaye ezikunceda ukufumana imali eyongezelelweyo. Ukwengeza, somdlalo kuquka imiqondiso zasendle, iisimboli usichithachithe, neziphindi, aziyeki abakhululekileyo ngokungcakaza.
Dlala Cat & Imouse Casino wethu ezicetyiswayo
Indlela yokudlala umdlalo
njengoko Cat & Mouse umatshini umdlalo isiqhamo, yinto umdlalo elula ukufunda indlela yokudlala. Unakho ukudlala bezonwabele ukuze ufumane ukuva kwe umdlalo okanye badlale ukuba imali yokwenene ukuqala esiwinileyo akukho xesha. Ukuqalisa umdlalo uyakwazi ukubeka kungcakazo leyo sigcinwe sisezantsi 10p.
I mouse iisimboli zasendle leyo bokubabambela nakowuphi na ezinye iimpawu, ngaphandle isimboli usichithachithe okanye isimboli umdlalo ibhonasi ukugqibezela indibaniselwano ngokuphumelela.
Ikati Yimbonakaliso usichithachithe. Ukuba spin imiqondiso usichithachithe ezintathu okanye ngaphezulu kumgca omnye uya kunikwa aziyeki ivideo.
Ingxowa Ikati kunye nempuku imali isimboli ngokungcakaza kwaye ukuba ungenzi ezintlanu ezi kwi payline esebenzayo, uya kunikwa yonke yeJekhpothi.
Ukuba spin imingxuma emibini okanye ngaphezulu mouse kwi payline esebenzayo, uya kungena umdlalo ibhonasi. Uya bangasiwa ibhodi udlala mouse nekati. Kuya kufuneka lokujikelezisa idayisi kwiinzame ukugcina ngaphambi mouse ye ikati. Uya kuphumelela njengoko izikwere ufika kunye nobude bexesha obamba ukugcina mouse phambi ikati. Unokoyisa kwekhefu ezinkulu kulo mdlalo.